महिनावरीलाई सार्न सकिन्छ ? – उज्यालो खबर
शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ | November 27, 2020
महिनावरीलाई सार्न सकिन्छ ?
बिहिबार, कार्तिक २७, २०७७ | १८:५०:४७ |
महिनावरी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपयले यस अवस्थालाई ‘अशुद्ध’ भएको वा ‘नछुने’ भएको भन्ने गर्छन् ।
समान्यतयाः यो बेलामा कुनै पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक अस्था भएको शुभ कार्यमा सहभागी नहुने तथा कसैलाई नछुने र छोएको नचल्ने भएकोले पनि नछुने भनिएको हो । जबकी यो आफैमा एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो र यसम शुद्ध वा अशुद्ध भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । यसै सन्दर्भमा प्रसूती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण शाहसँग भलाकुसारी गरिएको छ ।
महिनावरी हुनु भनेको कस्तो शारीरिक स्थिती हो ?
यो एक शारीरिक प्रक्रिया हो । खासगरी नारीहरुको शारीरिक परिपक्कता आएपछि मुख्यतया ईस्ट्रोजेन र प्रोजेष्ट्रोन हर्मोनले गर्दा पाठेघरको भित्रि तहमा आएको परिवर्तन र सो तह टुक्रिएको कारणले महिनावारी हुने गर्छ । महिनावारी हुनुका पछाडि हाईपोथालामस्, पिट्युटरी ग्रन्थी, अण्डास्य र पाठेघर सबैको आ–आफ्नै भूमिका रहेको हुन्छ ।
यस क्षणमा महिलाहरुले कति सहज अनुभव गर्छन् ?
महिनावरीको बेला सबैलाई एकै किसिमको अनुभव नहुन सक्छ । कसैलाई यो सामान्य लाग्छ भने कसैका लागि पीडादायी पनि । महिनावरीको समयमा कतिको पेट दुख्ने, ढाड दुख्ने, झर्को लाग्ने पनि हुन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई आरमको जरुरत हुनसक्छ । धेरै तनाव, कामको बोझ दिनु उचित हुँदैन ।
चाडपर्वमा त्यस्तो अवस्थाबाट बच्ने कुनै विकल्प छन् ?
खासगमा त म के सल्लाह दिन्छु भने महिनावरीलाई नियमित प्रक्रिया अनुरुप नै हुन दिनुपर्छ । यसलाई स्वभाविक रुपले लिनुपर्छ । यद्यपि आफुलाई असहज महसुष हुने भए त्यसको पनि केही विकल्प छन् ।
महिनावारी २–४ दिन पर सार्न सकिन्छ । यस अवस्थामा महिनावरी हुने दिन भन्दा १–२ दिन अगाडि बजारमा उपलब्ध हुने प्रोजेष्ट्रन चक्की प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रोजेष्ट्रोन चक्की ५ मिलिग्रामको बिहान र बेलुका गरी २ पटक कम्तिमा २ दिन अगाडिबाट शुरु गरेको राम्रो हो । यस प्रयोजनका लागि प्रोजेष्ट्रोन चक्की नपाएको अवस्थामा परिवार नियोजनका लागि प्रयोग गरिने खाने चक्कि पिल्स सेवन गर्दा पनि हुन्छ ।
पिल्समा पनि ईस्ट्रोजेन र प्रोजेष्ट्रोन हर्मोन हुने भएकाले यो प्रयोग गर्न सकिन्छ । पहिलेदेखि नै परिवार नियोजनका लागि पिल्स खाईरहेको महिलाले महिनावारी पर सार्न खैरो चक्किको सट्टा पनि सार्नुपर्ने दिन सम्म सेतो चक्कि नियमित खानु पर्छ । अन्य परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरिरहेको महिलाहरुले पनि महिनावारी पर सार्न मिल्छ ।
यसले कुनै असर गर्दैन ?
सामान्यत नियमित प्रक्रियामा भइरहेको महिनावरीलाई पर सार्नु भनेको बाध्यकारी अवस्थामा हो । यसले दीर्घकालिन रुपमा खासै असर गर्दैन । यद्यपि यस्तो चक्की पटक पटक प्रयोग गरियो भने त्यसले चाहि समस्या ल्याउन सक्छ ।
कस्तो असर ?
महिनावारी अनियमित हुने तथा अन्य गडबडि हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता चक्किहरु पटक पटक २–४ दिन मात्र सेवन गर्नु भन्दा पुर्ण अवधि अर्थात २१ दिन नै खानु राम्रो हुन्छ ।
बच्चाको शारीरिक मानसिक विकासको लागि नभुलौं यी ६ सुझाव
देशका ३९६ पालिकामा अस्पताल बनाउदै छौ : राज्यमन्त्री रावत
कक्षा १२ को परीक्षा भोलिदेखि, कोरोना संक्रमितले पछि दिन पाउने : शिक्षामन्त्री
जिल्ला नै एम्बुलेन्सविहीन: पचास शैयाको अस्पतालमा बिरामी बोक्न डोको
विदेश जान लेभल ए मान्यता पाएका सरकारी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्ट मात्रै मान्य हुने
हुप्सेकोट गाउँपालिकामा विष्णुधामका साथै गुरुकुल शिक्षालय स्थापना गरिने
गम्भीर लक्षण देखिएका सङ्क्रमित होम आइसोलेशनमा बस्दा ज्यान जाने जोखिम बढ्यो : डा. बाँस्तोला
बन्द विद्यालय खोल्ने जिम्मा पालिकालाई (विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचासहित)
दाद रोग पहिचानको तरिका, यसबाट बच्न के गर्ने ?
२ हजार ७३६ कोरोना सङ्क्रमित थप , अहिलेसम्म १ लाख ६० हजारभन्दा धेरै डिस्चार्ज
ग्यास्ट्रिकको समस्या हुनेले चिया खाने कि कफी